UGoogle uhlaziya ujongano lwe-Wear OS kunye namakhadi | I-Androidsis
UEder Ferreño | | SmartWatch, Iinguqulelo ze-Android
I-Wear OS yinkqubo yokusebenza ehlaziyiweyo yeewatchwatches, ezasungulwa nguGoogle kunyaka ophelileyo. Ukuza kuthi ga ngoku, ukuqhubela phambili kwayo kwintengiso kuye kwacotha. Kwimeko yase-United States, abamele kwaphela i-10% yentengiso. Kodwa inkampani iyaqhubeka nokusebenza ekuphuculeni le nkqubo yokusebenza. Ngoku, ujongano olutsha lwaziswa kulo. Imalunga nayo utshintsho lwesibini olukhulu lomdibaniso efika ngaphezulu nje konyaka.
Ngeli xesha, Sifumana ujongano kunye neeTayile okanye amakhadi. Injongo yayo kukwenza ukuba i-Wear OS ibelula kubasebenzisi. Ukongeza, imiqondiso yokuhambisa inqanawa ikwabalulekile kule meko.
Ukungeniswa kwezi Tayile okanye amakhadi kuku hlukanisa ngcono iinxalenye zonxibelelwano ezisibonisa ulwazi olwahlukileyo. Ke ngoko, ngesimbo somzimba sinokuhamba phakathi kwala makhadi kwi-Wear OS. Ukuze ukwazi ukushukuma, kufuneka uskrole isikrini ngokuthinta okulandelayo. UGoogle wazisa ngamakhadi amathandathu ewonke.
Okwangoku, amakhadi amathandathu esiwafumanayo: Iinjongo, umsitho olandelayo, ixesha, ukubetha kwentliziyo, iintloko kunye nexesha. Akubonakali ngathi ziya kwenziwa ngokwezifiso, ubuncinci okwangoku. Ke la ngamacandelo amatsha anokufunyanwa ngabasebenzisi kwiiwotshi zabo.
Nangona uGoogle eza kunika ulwazi ngakumbi malunga noyilo olutsha lwe-Wear OS kuGoogle I / O 2019, ezakuqala kwiveki ezayo. Ekuqalisweni kolujongano, Kuye kwavakaliswa ukuba izakwenzeka kwinyanga ezayo. Ke ngoko, ngoJuni olu luyilo luya kusungulwa kwihlabathi liphela ngeewotshi.
Utshintsho olufuna ukukhuthaza i-Wear OS kwintengiso. Siza kubona ukuba ngaba yinto abayifumanayo abasebenzisi ngendlela elungileyo. Siza kugcina iso kumnyhadala kuGoogle I / O 2019, njengoko iindaba ezingakumbi zenkqubo yokubukela zinokubhengezwa. Ucinga ntoni ngolu tshintsho kujongano lwalo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » SmartWatch » UGoogle uhlaziya ujongano lwe-Wear OS
I-Facebook ye-Android ihlaziywa ngoyilo olutsha